Safidy fandaharana momba ny fitsaboana fiankinan-doha amin'ny filokana - Kaody Bonus Bonus amin'ny Internet
Posted on Aogositra 14, 2020 Aogositra 14, 2020 Author Andrew	Comments Off amin'ny Safidy fandaharana momba ny fitsaboana amin'ny filokana
Ny filokana dia mety ho fiarahana mahafinaritra mandritra ny fotoana fohy na, ho an'ireo olom-bitsy vintana, fomba iray handresena an'io boninahitra ratsy io. Mampalahelo fa mety lasa variana sy manaitaitra ny filalaovana ny Pies na hisintona ilay bandy mitam-piadiana iray ny mpiloka. Mety hahita fiankinan-doha izy ireo izay mety hanimba azy ireo ara-bola, ara-tsosialy, ara-tsaina na ara-batana.
Ny American Gaming Association dia nanombana fa ny 1 isan-jaton'ny Amerikanina dia mety filokana. Raha sendra an'ity toe-javatra mampiahiahy ity ianao dia misy ny safidin'ny programa fitsaboana ny fiankinan-doha amin'ny filokana izay mety hitondra fiovana lehibe amin'ny fiainanao. Eto izahay mba hanampy sy te-hanohana anao rehefa miverina amin'ny fiainanao tsy misy fiankinan-doha ianao; antsoy izahay 24/7 anio hanombohana.
Inona no mahatonga ny fiankinan-doha amin'ny filokana?
Fiankinan-doha, na inona na inona singa na asa atao, dia samy mahita ny fototr'izy io amin'ny psikolojia. Ka inona no mahatonga ny filokana? Na dia maro aza ny olona afaka manomboka na manao zavatra toy ny fahazarana, endrika fiankinan-doha rehefa miankina amin'ny saina ara-tsaina izany olona izany. Tsotra fotsiny, ny fiankinan-doha dia rehefa tsy afaka mijanona manao zavatra fotsiny ianao amin'ny fisafidianana irery satria mila ilay avo, vokatra farany na ny fahatanterahany izany. Gamblers Anonymous dia manazava fa matetika ny mpiloka dia afaka mahatsapa fa afaka mifehy ny asany izy ireo fa ny mpiloka an-tery kosa no tena voafehin'izy ireo. Azo antoka izany: Na dia tsy misy misafidy hanana fiankinan-doha aza, zava-dehibe ny misafidy ny fotoana handravana ny fihazonany azy.
Raha manjary andevozin'ny filokana ianao dia mety hisy vokany eo amin'ny fiainanao manontolo izany. Azonao atao ny miatrika fahasimbana ara-bola, ny fahaverezan'ny tranonao na ny asanao noho ny trosa filokana, ny famaranana ny fanambadiana na ny fahaverezan'ny fikarakarana zanaka, na ny fihodinanao ambany dia mety hitarika anao hanana fiankinan-doha fanampiny sy aretina ara-tsaina. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fanekena olana aloha araka izay tratra, mba hahitanao fanampiana amin'ny fitsaboana ny fiankinan-doha amin'ny filokana.
Ho fanampin'izay, mora kokoa noho ny hatramin'izay ny mpiloka ankehitriny. Mipoitra any amin'ny fanjakana maro ny Casinos, ary vonona ny hiditra amin'ireo tranonkala filokana marobe amin'ny Internet. Aza avela hitarika anao na ireo olon-tianao mankamin'ny famoizam-po lalina ny fidirana mora. Antsoy izahay anio mba hahalala bebe kokoa momba ny fitsaboana, ny fotodrafitrasa ary ny vondrona akaiky anao. Misy izahay amin'ny fotoana rehetra rehefa miantso ianao.
Mety ve ny filokana amin'ny filokana?
Ny aretina ara-tsaina, toy ny aretin-tsaina manelingelina na tsy fanarahan-dalàna dia tsy manana teboka farany ilazana fa sitrana izy ireo. Ao amin'ny Gamblers Anonymous dia fantatry ny mpikambana fa marina ihany koa ny aretin'izy ireo. Misy fanafodin'ny filokana ve? Tsia. Fa toy ny fiankinan-doha hafa ihany, dia misy fepetra raisina handravana ny fihazonana ny filokana amin'ny fiainanao na amin'ny ain'ny olon-tianao. Na miloka foana ianao ary tsy afaka mijanona na mandeha amin'ny binge izay tsy voafehy intsony dia izao no fotoana itadiavana fanampiana.
Therapies ho an'ny mpiloka
Ny fitsaboana ny mpitsoka dia mitaky ny mazoto amin'ny fitsaboana mahery vaika mankany amin'ny fanarenana mifototra amin'ny tarika. Ny fandaharan'asa fitsaboana amin'ny fiankinan-doka amin'ny filokana dia tsy valan-jaza iray-mifanaraka-rehetra; fa kosa, mila manabe ny tenanao ianao amin'izay safidy mety ho anao sy ny ankohonanao, mba hahafahanao mandray fanapahan-kevitra tsara izay mitondra mankany amin'ny vokatra tsara indrindra ho an'izay rehetra voakasik'izany.
Fitsaboana fitsaboana kognitif
Ny fotoam-pitsaboana kognitive fitondran-tena-fitsaboana dia nampiseho valiny mahomby amin'ny fiatrehana karazana fiankinan-doha, anisan'izany ny filokana. Miaraka amin'ity fitsaboana ity, ny matihanina amin'ny fahasalamana ara-tsaina dia afaka manampy ny mpidoroka hamantatra ny fizotran'ny eritreritra izay nitarika ny fampiharana filokana terena. Ohatra, maro ny mpiloka no mino fa raha mametraka filokana vetivety fotsiny izy ireo, dia azo antoka fa handresy ilay jackpot lehibe nenjehiny. Raha tokony hanonofinofy harena ianao, dia hitandrina izany ny mpiloka hafa, manantena fa handresy ny trosany taloha ny fandresena amin'ny ho avy.
Noho ny toe-tsaina ara-tsaina momba ny fiankinan-doha filokana dia mety hiankina tanteraka amin'ny halehiben'ny jiro sy ny fahaverezan'ny lesoka. Amin'ny fitsaboana fitondran-tena kognitif, dia afaka manomboka mamantatra ireo diso ireo ny mpiloka ary miasa amin'ny fanitsiana azy ireo. Rehefa fantarina sy niresaka ireo antony ireo, dia afaka manomboka amin'ny làlan-kaleha ianao na ny olon-tianao.
Fomba fitsaboana hafa
Ny safidy amin'ny fandaharan'asa fitsaboana amin'ny fiankinan-doka amin'ny filokana dia misy fomba fitsaboana hafa koa. Ny psychotherapy, na ny fomba fiatrehana ny filokana amin'ny filokana amin'ny alàlan'ny fotoam-pivarotan'ny mpanolo-tena sy vondrona, dia mety hitarika vokatra maro mitovy amin'ny fitsaboana fitondrantena kognitif, anisan'izany ny antony manala-javatra sy ny fandavana ny hevi-diso.
Ny fitsaboana aram-pianakaviana koa dia mety mahasoa amin'ny mpiloka efa miankin-doha. Rehefa miloka mafy ianao dia azo inoana fa voakasik'izany koa ny fianakavianao. Ny fitsaboana ny fianakaviana dia tsy miresaka momba ny olana momba ny filokana ihany fa miresaka momba ny fifandraisana amin'ny fianakaviana manasitrana ary miara-mandroso miaraka amin'ny lalan'ny fanarenana miaraka.
Ny ampahany lehibe amin'ny fitsaboana ny filokana dia mety ho ferana ihany koa ny fidirana amin'ny fahafahan'ny filokana. Mety ho sarotra izany; olona maro no tsy mahazo misoroka ny fiparitahan'ny birao Super Bowl na ny dokam-barotra miseho amin'ny Internet. Saingy amin'ny farafaharatsiny hamerana ny fidirana amin'ny lalana miharihary indrindra sy azo idirana, ny mpifanaloka amin'ny filokana iray dia afaka manomboka mifantoka amin'ny fitondran-tena manaitra na manery azy, fa tsy hiatrika tsy ialana fotsiny.
Toeram-pitsaboana momba ny fiankinan-doha amin'ny homamiadidy
Raha fiankinan-doha ianao na ny olon-tianao ary ny fiankinan-doha dia nahatonga ny safidim-piainana ratsy sy valim-piainana, ny toeram-pitsaboana fidirana an-trano na tsy mahazo marary no mety ho safidy tsara indrindra ho anao.
Ny tombotsoan'ny fikarakarana trano filokana
Ny tombontsoa azo avy amin'ny fitsaboana ny trano filokana dia mety hahatratra lavitra noho ny fikarakarana ho an'ny marary noho ny fitsaboana fotsiny satria ny marary any dia mifantoka amin'ny fanarenana raha tsy misy ny tabataban'ny fiainana andavanandro. Ny filankevitra nasionaly momba ny filokana dia manome tombony ao anatin'izany:
Programa entina miatrika olana ara-tsaina sy fitondran-tena
Fitsaboana mitovy amin'ny aretina mifandray
Fanaraha-maso ara-pitsaboana sy ara-tsaina
Fitaovana fiankinan-doka amin'ny trano filokana
Miaram-pefy amin'ny lozisialy ireo milina avo lenta ary miatrika olana momba ny fiankinan-doha mitovy amin'ny filokana mpiloka vola. Ny fahasamihafana, mazava ho azy, dia ny manome safidy safidy fanampiny ankoatra ny tolotra fitsaboana nentim-paharazana. Ohatra, ny trano filokana amin'ny trano filokana dia mety hanolotra fitaovana toa ny spaoro ao anatin'izany ny famonoana, ny dobo sy ny fisotroana fandroana be ary ny toerana somary matanjaka kokoa. Amin'ny farany, ireo mpanafika be mpanan-karena dia mitovy amin'ny fitsaboana aretin-tsaina mitovy amin'ny olon-drehetra; Manao izany amin'ny toe-javatra mampitaha azy kokoa izy ireo fa tsy trano hôpitaly.
Ny tombony iray amin'ireo ivon-toerana hafa izay ny trano filokana manandoka dia mampiakatra ny fidirana amin'ireo matihanina ara-pitsaboana sy ara-tsaina. Ny olona afaka mandoa vola bebe kokoa dia mety ho hita bebe kokoa, ary mety hitarika faharenana haingana kokoa indraindray.
Programa fandevenana amin'ny filokana
Ny fandaharan'asa filokana amin'ny filokana ekipa dia mifantoka amin'ireo matihanina sahirana izay mahatsapa fa fotoana tokony hanaovana fanovana ireo fomba manimba azy ireo, fa izay tsy manam-potoana fotsiny dia mandany fotoana lavitra amin'ny sehatry ny asa. Ireo matihanina ireo, izay, toy ny haavo avo lenta, dia mety handoa vola bebe kokoa amin'ny fitsaboana azy ireo, mety hanana fidirana amin'ny fanafohezana ireo programa fohy, toy ny fandaharana amin'ny faran'ny herinandro ihany. Mety ho namboarina amin'ny fomba hafa ny programa mba hamelomana ny fiankinan-doha ary mamela azy ireo handray anjara amin'ny raharaha andavan'andro amin'ny tombontsoan'ny orinasa mpanatanteraka.
Ny programa filokana momba ny filokana sy ny fitsaboana
Ny programa fanarenana an-tsitrapo sy ny fitsaboana dia mety misy avy amin'ny vondrona toa ny Gamblers Anony ka ny vondrona vondrona manara-maso amin'ny fitsaboana ny olona tsirairay. Ny ankamaroan'ny zavatra azo atao amin'ny tsy manam-pahasalamanana dia azo atao ao anaty toerana tsy misy marary. Ny fahasamihafana eo amin'ny fandaharam-pitsaboana inpatient sy ny fitsaboana ny diabeta dia ny halavan'ny fotoana nolaniana amin'ny fitsaboana. Ny drafi-panafody inpatient marobe dia misy ny fikarakarana ny fitsaboana ny outpatient taorian'ny famotsorana ny marary. Ny filankevitra nasionaly momba ny olana amin'ny filokana dia manome soso-kevitra amin'ireto topi-kevitra manaraka ireto mba hahitana ny fandaharam-piraisan-tsakafo momba ny filokana amin'ny filokana.
Fitaovana voamarina miaraka amin'ireo mpiasa manana traikefa sy manana fahazoan-dàlana feno
Programa efa namboarina filàna filokana
Asa amin'ny mpanolotsaina filokana voamarina
Iray amin'ireo protocôte momba ny filokana amin'ny filokana an-tserasera malaza dia natsangan'ny Gamblers Anonymous ary miorina amin'ny fandaharana 12 dingana mitovy amin'ny nampiasain'ny Alcoholics Anonymous sy Narcotics Anony. Ny Gamblers Anonymous dia miara-miasa amin'ny mpifoka izay miaiky ny olany ary mitady hanao fiovana rehefa miasa ihany koa izy ireo mba hamerenany ny famoronana amin'ny filokana. Ny fikambanana, izay miaro ny fampahalalana rehetra zahana ao anaty fihaonana tsiambaratelo, dia miasa mba hitodihana ireo mpiloka vao manaiky ho any amin'ny toerana ahafahan'izy ireo manohy ny fiainany, hanao famerenam-bola ho an'izay rehetra naratra tamin'ny filokana ary avy eo dia nanoro hevitra ny hafa izay mizotra amin'ny làlana iray.
Raha nahatsapa fiankinan-doha amin'ny filokana ianao na ny olon-tianao dia afaka manampy anao izahay hahita fivoriana any an-toerana Gamblers Anonymous, toeram-pitsaboana na programa amin'ny hopitaly. Miantso anio hanapaka ny rojom-pilalaovana amin'ny fiainanao ary manomboka miasa amin'ny fahononam-po. Izahay dia manana mpiofana voaofana 24/7 hanampy amin'ny filanao rehefa miantso ianao.
Famolavolana sy fanafody mahery vaika
Indraindray ny fitsaboana dia mety ho ampahany manan-danja amin'ny protocol fanarenana fanampiny amin'ny filokana. Raha toa ianao na olona iray ao amin'ny fianakavianao miloka an-tsitrapo, dia mitandrema ary ampiasao fotsiny ireo fanafody efa natokana na natolotry ny matihanina matihanina. Rehefa voafehin'ny fiankinan-doha ianao dia mora ny miditra amin'ny hafa amin'ny alàlan'ny fitsaboana amin'ny tenany ihany. Na izany aza, ny fanafody voatondro sy fanaraha-mason'ny dokotera anao dia afaka manampy amin'ny fahasitrananao amin'ny ankapobeny.
Ny University of Minnesota dia nahavita fanadihadiana taona maro lasa izay mba hijerena ny fiantraikan'ny paikadim-panafody toy izany. Ny mpandray anjara tamin'ny fandalinana azy dia nanjary vondrona roa: ireo izay tsy voafehin'ny tsindrona ambany sy ireo izay manaiky ho resin'ny fihetsika manery. Raha ny mpiloka an-katerena dia hita fa misy fiatraikany tsara ny fanafody ampiasaina amin'ny drafitry ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina, toy ny naltrexone. Ho an'ireo mpiloka tsy voafehin'ny tsindrona ambany, ny fandinihana dia nandinika ireo zavatra izay misy fiatraikany amin'ny ati-doha alohan'ny ati-doha. Ny programa fitsaboana nofidianao dia afaka manampy amin'ny famantatra ireo safidy tsara indrindra amin'ny toe-javatra iainanao.
Ahoana no hahitana ny fikatsahana fitsaboana amin'ny tarigetra tsara indrindra amin'ny filokana
Ny fitadiavana ny programa fitsaboana ny fiankinan-doha amin'ny filokana mety aminao na ny olon-tianao dia mety ho dingana maharitra. Afaka manampy isika. Ny mpiasanay dia afaka mifanakalo hevitra momba ny toe-javatra tsy manam-paharoa ary manampy anao hamantatra izay programa na safidy fitsaboana afaka manampy anao sy ny fianakavianao hiala amin'ny fiankinan-doha amin'ny filokana. Koa antsoy izahay anio amin'ny, mifanakaloza hevitra amin'ny safidinao miaraka amin'ny iray amin'ireo mpanolotsaina fantatsika, ary atombohy ny dia miverina amin'ny fiainana tsy misy fiankinan-doha.
Eto amin'izao fotoana izao ny tapakila:
1 Inona no mahatonga ny fiankinan-doha amin'ny filokana?
2 Mety ve ny filokana amin'ny filokana?
3 Therapies ho an'ny mpiloka
4 Fitsaboana fitsaboana kognitif
5 Fomba fitsaboana hafa
6 Toeram-pitsaboana momba ny fiankinan-doha amin'ny homamiadidy
7 Ny tombotsoan'ny fikarakarana trano filokana
8 Fitaovana fiankinan-doka amin'ny trano filokana
9 Programa fandevenana amin'ny filokana
10 Ny programa filokana momba ny filokana sy ny fitsaboana
11 Famolavolana sy fanafody mahery vaika
12 Ahoana no hahitana ny fikatsahana fitsaboana amin'ny tarigetra tsara indrindra amin'ny filokana
13 Eto amin'izao fotoana izao ny tapakila: